Iyo yekutanga beta yeWOSOS 3.2 yave kuwanikwa kune vanogadzira | Ndinobva mac
Iyo yekutanga beta yeWOSOS 3.2 yave kuwanikwa kune vanogadzira
Zvakare isu takatanga neshanduro dze beta dzeApple svondo rino uye mune iyi kesi tiri kutarisana neyekutanga beta vhezheni yeWOSOS 3.2 kwayakawedzerwa SiriKit iyo inobvumidza vanogadzira kushandisa wizard kune kwavo kunyorera uye yemitambo muoti. Iyi yekuvandudza yakaburitsa pamambure svondo rapfuura pakaburitswa macOS, iOS uye mamwe ma betas, asi zvaive zvisipo kusvika nhasi Apple payakaiburitsa yevagadziri.
Iyo yemitambo modhi muApple wachi haina chimwe chinhu kunze kwezvataifanira kushandisa mu iPhone kuti "tisakanganisa" vamwe vanhu patinenge tichishandisa chishandiso. Izvo zvazvinoita mune iyo Apple wachi kuona kumira kumisa iyo skrini patinosimudza ruoko (kana isu takaita kuti iitwe) asi zviziviso zvicharamba zvichisvika nekutenda kune iyo vibration. Mushandisi anozogona kuona aya maziviso nekukwira pachiratidziri kana nekudzvanya Dhijitari Korona, asi izvi hazviitirwe otomatiki.
Yakaunzwa muWatchOS 3.1.3, Theatre Mode inobvumira vashandisi kuti vakurumidze kunyararidza Apple Watch uye vadzivise kumutsa iyo skrini nekusimudza ruoko. Vashandisi vacharamba vachigamuchira zviziviso (kusanganisira haptics) pavanenge vari muTheatre Mode, iyo yavanogona kuona nekukanda screen kana kudzvanya iyo Dhijitari Crown.
Shanduro nyowani watchOS 1 beta 3.2 ikozvino iri mumaoko evakagadziri uye ikozvino zvinotarisirwa kuti ivo vanozonatsa iwo ruzivo kuti vatange iyo yekupedzisira vhezheni nekukurumidza sezvazvinogona
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Iyo yekutanga beta yeWOSOS 3.2 yave kuwanikwa kune vanogadzira
Painnt - Pro Art Mafirita, akagadziridzwa kuti ashandure 1.30
Houston yatove neruzivo nezve ruzhinji rwekufambisa kuburikidza neApple Mepu